Gaazeexessaa beekamaa fi rogeessaa Mohammad Adamoo gara biyyaa gale. – Kichuu
[OBN 24 10 2010] Gaazeexessaa beekamaa fi rogeessaa miidiyaa Mohammad Adamoo waggota 16f baqannaadhaan biyya USA Jiraataa ture har’a ganama Finfinnee gale jira. Mohammed Ademoo, hundeessaa Marsarii O.Pride.Com yoo ta’u, fuula marsariitii kana irrattis dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa dabalatee taatewwan gaanfa Afrikaa hedduu barreessee Ummata biraan gahaa tureera.
Dabalatanis Miidiyaa dhageettii guddoo akka addunyaatti qabu Al Jazeera-America irrattis hojjataa ture. Hiree Miidiyaa kanatti dhiyeenya qabuun sagaleen Ummata Oromoo gurra addunyaa bira akka gahuuf shoora guddoo nama taphateedha Obbo Mohammed. Mohammed Ademoo rogeessa cimaa sochii qabsoo Oromoo Qeerroon taasisaa ture keessattu, saba-himaalee gurguddoo akka Al jazeera irratti xiinxalaa fi ibsa bal’aa kennaa tureera.
OLF Supporters at Boolee Internationl Airport
Dhugumatti ademon QEERROO fii uummata oromoo hunda irraa badhaasa argachuu nama qabu.
Gaazexeessaa dhugaa Oromoo addunyaatti facaase Oromoo milkii har’aatiin gahe Mohaammad Adamoo.
Gaazexeessaa fi Rogeessi Oromoo Obbo Mohammed Ademoo turmaata jireenya biyya Ormaa (USA) waggoota 16’n booda guyyaa har’aa Oromiyaa seeneera.
Mohammed Ademoo,hundeessaa Marsarii O.Pride.Com yoo ta’u, fuula marsariitii kana irrattis dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa dabalatee taatewwan gaanfa Afrikaa hedduu barreessee Ummata biraan gahaa tureera.
Dabalatanis Miidiyaa dhageettii guddoo akka addunyaatti qabu Al Jazeera-America irrattis hojjataa ture.
Hiree Miidiyaa kanatti dhiyeenya qabuun sagaleen Ummata Oromoo gurra addunyaa bira akka gahuuf shoora guddoo nama taphateedha Obbo Mohammed.
Mohammed Ademoo rogeessa cimaa sochii qabsoo Oromoo Qeerroon taasisaa ture keessattu, saba-himaalee gurguddoo akka Al jazeera irratti xiinxalaa fi ibsa bal’aa kennaa tureera.
Hayyoota fi Rogeeyyii miiltoo isaa ta’an kanneen akka Obbo Jawaar Mohammed wajjiin ta’uun sochii Oromo First fiiniinsuu keesaattillee Hayyuun dargaggeessi kun waan jabo dalagaa nama tureedha.
WAA’EE #MOHAMMED ADEMOO HAQA TURAN DHOKSUUF YAALUUN XAWALWWAALUMMAA SIYAASAATI
1. Namni kun Yaada maddisiisuutii ka’ee amma Caasaa OMN diriirsee Jalqabsiisuutti nama OMN keessatti shoora guddaa qabu dha. Ragaa hedduutu jira. Namoonni kun callisanii kan ta’an Oromoon walitti dhufe kun wal komachuu hin qabu jedhanii malee icciita guddaa beeku. Garuu ofii isaanii dura tokkummaa Oromoo filatan. Uummati JSM waliin qamisii urgufu Uummati akka bishaan gabateerraa kunis dhugaa namaa awwaaluuf JSM caalu.
2. Silaa namni kunis OMN hundeessuu keessatti shoora guddaa qaba jedhanii hojii isaaf galateeffachuu qabu turan. Uummati kun garuu waan gooftaa isaanii (Waaqa tolfamaa) uummatan JSM akka Waaqa isa isaan uumeetti Waan itti sagaduu barbaadaniif OMN qofaa miti otuu isaanii danda’amee ABO kanayyuu otuu hin dhalatin dura garaadhuma Harmee isaa keessa taa’ee isatu uume jechuu barbaadu. Har’a OMN hojii Adamoon hojjete hunda gabaasee garuu hundeessaa OMN keessaa nama shoora guddaa qabu ta’uu isaallee maqaa hin dhoofne. Kun Salphina JSM dha.
3. Shira inni hojjetu dha. Miidiyaa mitii dhaabi kamiyyuu Website isaa irratti maqaan Hundeessitootaa ni tarreeffama garuu OMN jalqabumaa kaasee kana waan beekuuf akka maqaan hundeesitootaa dhahamu hin barbaadu ture. Yaa JSM kan kees salphinni kee fagoo miti. Uummati inni waan hunda taajjabu callisee amma gareen kee utaalanii fixatanitti eegaa jiru.
4. Shira wal-xaxaa gurguddaa JSM alaaf keessaatti taasisaa jiru; hojii xawalwwaallota miidiyaa dawoo godhachuun oliif gadi kurkuraa jiranis #Taajjabbiin jala bu’ee qorataa jira!
Beekan G Erena, Adoolessa, 1 2018